စာဝါကျားငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
နီပေါနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော စာဝါကျားငှက်
စာဝါကျားငှက် (Emberiza aureola) သည် စာကလေးမျိုးနွယ်ဝင် ငှက်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်မြောက်ပိုင်း၊ ရုရှားနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ အလျား ၁၄ မှ ၁၆ cm (၅.၅ မှ ၆.၃ in) ရှိပြီး အလေးချိန် ၁၇ မှ ၂၆ g (၀.၆ မှ ၀.၉ oz) ရှိသည်။ ယင်းငှက်ကို ၂၀၀၄ မတိုင်ခင်ထိ နိုင်ငံတကာ သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းမှ မျိုးသုဉ်းရန် စိုးရိမ်ရမှုအနည်းဆုံးမျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ငှက်ကောင်ရေ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာမှုကြောင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် မျိုးသုဉ်းရန် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ရသော မျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤငှက်မျိုးစိတ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆောင်းခိုကာလအတွင်း အများဆုံးဖမ်းဆီးကြသည်။
စာဝါကျားငှက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စပါးပင်နှင့် ရေစပ်စပ်ရှိနေသော wetlands နေရာမျိုးတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကျက်စားပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ အင်းတော်ကြီးကုန်းတွင်းပိုင်း၊ ကွင်းပြင်များနှင့် လယ်ကွင်းများတွင် အများဆုံးတွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် ပုဂံမြို့အနီးတစ်ဝိုက်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မအူပင်မြို့၊ ဝါးခယ်မမြို့ များတွင် တွေ့နိုင်ကာ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်မှ နတ်မတောင်ဒေသများတွင်မူ မှတ်တမ်း မရရှိဖူးကြောင်း သိရသည်။ စာဝါကျားငှက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ငါးနှစ်ခန့်အကြာတွင် မျိုးသုဉ်းရန် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ရသောအဆင့်သို့တစ်ဆင့် တက်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ စာဝါကျား ငှက်မျိုးစိတ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အကောင်ရေ နှစ်သိန်းခန့် တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၂၀ မှ ၆၀၀ ကြားသာ တွေ့နိုင်တော့ကြောင်း IUCN အနီရောင်စာရင်းတွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ စာဝါကျားငှက်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ၆၁ ကောင်၊ ပုဂံတွင် ၁၀ ကောင်ကျော် မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပြီး အင်းလေး၊ အင်းတော်ကြီး၊ ကလောမြို့နှင့် အခြားဒေသအချို့တွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က စာဝါကျားငှက်ကို ပေါများစွာတွေ့ရှိရသော်လည်း လှောင်ချိုင့်တွင်မွေးရန် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ ဘုရားတွင် ဘေးမဲ့လွှတ်ရန် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ စာကလေးကြော်ပြုလုပ်ရန် အခြားစာကလေးငှက်များနှင့် ရောနှော၍ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းတို့ကြောင့် ငှက်ကောင်ရေ လျော့နည်းလျက်ရှိပြီး မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး အန္တရာယ်ရှိသည့် ငှက်မျိုးစိတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းငှက်သည် အုပ်စုလိုက်နေတတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာလမှ ဧပြီလအထိ ခြောက်လကြာ နေထိုင်တတ်သည်။ စာဝါကျားငှက်သည် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များအရ လုံးဝကာကွယ်ထားသည့် ငှက်မျိုးစိတ် ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ BirdLife International (2017). "Emberiza aureola". IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T22720966A119335690.en.
↑ Brazil၊ Mark (2009)။ Birds of East Asia။ London, UK: Christopher Helm။ p. 488။ ISBN 978-0-7136-7040-0။
↑ abundant bird species could be wiped out like passenger pigeons။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိသော စာဝါကျားငှက်အား ထိန်းသိမ်းမည့်နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စတင်ပါဝင်မည်။ Eleven Media Group (3 December 2018)။
↑ ၅.၀ ၅.၁ လှောင်ချိုင့်စံ ရှားပါးမျိုးစိတ်။ Myanmar Times (2 May 2019)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စာဝါကျားငှက်&oldid=712711" မှ ရယူရန်
မြောက်အာရှတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ရုရှားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။